” ဝုဒ် အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ မှတ်တမ်းကောင်းရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆွီဒင် ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား အီလန်ဂါ ကို အထူးချီးကျုးသွားခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးရှား “ – Sport Gaber
ယူႏိုက္တက္နည္းျပ ဆိုးရွားက ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ္ အေဝးကြင္း ရွံုးပြဲမရွိ မွတ္တမ္းေကာင္း ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ယူနိုက္တက္ အသင္းအေပၚဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တာ ေတြ့ရဘာတယ္ ။
ဝုဒ္ အသင္းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ဆိုးရွား သည္ ယူ႐ိုပါလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲအတြက္ ရည္႐ြယ္ကာ အဓိက ကစားသမား အမ်ားစုကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ၿပီး အရန္. ကစားသမား အမ်ားစုကို ပြဲထြက္ ကစားသမားအေနနဲ႔ အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဆိုးရွား သည္ အထူးသျဖင့္ ယူနိုက္တက္ အသင္း နဲ႔ ဒုတိယေျမာက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္မွာ သြင္းဂိုးရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဆြီဒင္ျကယ္ပြင့္ တိုက္စစ္ ကစားသမား အီလန္ဂါရဲ႕ ‌ျေခစြမ္းကို သေဘာက်လ်က္ရွိပါတယ္။
အသက္ 19 နစ္အ႐ြယ္ သာ ရွိေသးတဲ့ အိုင္ဗရီကို့ ျကယ္ပြင့္ တိုက္စစ္ ကစားသမား ထရာအိုေရး ေကာ ယူနိုက္တက္ အသင္းအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ ပြဲထြက္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ဝုဒ္ ေနာက္တန္းကို အေကာင္းဆုံး ဒုကၡေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
BT Sport နဲ႔ေတြ႕ဆုံရာမွာ ဆိုးရွားက “ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အရမ္းပဲ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ သူတို႔က ေဘာလုံးကို အေကာင္းဆုံး ထိန္းခ်ဳပ္ ကစားႏိုင္ၿပီး အခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုက္တန္တဲ့ႏိုင္ပြဲရခဲ့တာပါ။” လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။
ဆြီဒင္ျကယ္ပြင့္ တိုက္စစ္ ကစားသမား အီလန္ဂါရဲ႕ အျမန္ႏႈန္း ႏွင့္ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပမႈ အိုင္ဗရီကို့ျကယ္ပြင့္ တိုက္စစ္ ကစားသမား ထရာအိုေရးနဲ့ ေဝးျကယ္ပြင့္ ကြင္းလယ္ ကစားသမား ဂ်ိမ္းတို့ ကို ဆိုးရွားက အထူး ခ်ီးက်ုးခဲ့တာ ေတြ့ရဘာတယ္ ။
ဆြီဒင္ျကယ္ပြင့္ တိုက္စစ္ ကစားသမား အီလန္ဂါ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရမ္းပဲ ေပ်ာ္႐ႊင္မိပါတယ္။ ယူနိုက္တက္ အသင္းနဲ့အတူ ေတာက္ပလာမယ့္ ျကယ္ 1 ပြင့္ ျဖစ္တယ္လို့ ဆိုးရွား က ေျပာျကားခဲ့တာ ေတြ့ရဘာတယ္ ။ ယူႏိုက္တက္အသင္း သည္ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ အဆင့္2ေနရာသာ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အေဝးကြင္း ရႈံးပြဲမရွိမွတ္တမ္းက ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းေနပါတယ္။
ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးရှားက ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် အဝေးကွင်း ရှုံးပွဲမရှိ မှတ်တမ်းကောင်း ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ယူနိုက်တက် အသင်းအပေါ်ဂုဏ်ယူမိကြောင်း ပြောကြားခဲ့တာ တွေ့ရဘာတယ် ။
ဝုဒ် အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ဆိုးရှား သည် ယူရိုပါလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲအတွက် ရည်ရွယ်ကာ အဓိက ကစားသမား အများစုကို ချန်လှပ်ခဲ့ပြီး အရန်. ကစားသမား အများစုကို ပွဲထွက် ကစားသမားအနေနဲ့ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဆိုးရှား သည် အထူးသဖြင့် ယူနိုက်တက် အသင်း နဲ့ ဒုတိယမြောက် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်မှာ သွင်းဂိုးရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆွီဒင်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား အီလန်ဂါရဲ့ ‌ြခေစွမ်းကို သဘောကျလျက်ရှိပါတယ်။
အသက် 19 နစ်အရွယ် သာ ရှိသေးတဲ့ အိုင်ဗရီကို့ ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ထရာအိုရေး ကော ယူနိုက်တက် အသင်းအတွက် ဒုတိယမြောက် ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး ဝုဒ် နောက်တန်းကို အကောင်းဆုံး ဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
BT Sport နဲ့တွေ့ဆုံရာမှာ ဆိုးရှားက “ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရမ်းပဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ သူတို့က ဘောလုံးကို အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ် ကစားနိုင်ပြီး အခွင့်အရေးတွေ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုက်တန်တဲ့နိုင်ပွဲရခဲ့တာပါ။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဆွီဒင်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား အီလန်ဂါရဲ့ အမြန်နှုန်း နှင့် စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှု အိုင်ဗရီကို့ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား ထရာအိုရေးနဲ့ ဝေးကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ် ကစားသမား ဂျိမ်းတို့ ကို ဆိုးရှားက အထူး ချီးကျုးခဲ့တာ တွေ့ရဘာတယ် ။
ဆွီဒင်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ် ကစားသမား အီလန်ဂါ နဲ့ ပတ်သက်လို့ အရမ်းပဲ ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့အတူ တောက်ပလာမယ့် ကြယ် 1 ပွင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုးရှား က ပြောကြားခဲ့တာ တွေ့ရဘာတယ် ။ ယူနိုက်တက်အသင်း သည် ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ အဆင့်2နေရာသာ ရရှိခဲ့ပေမယ့် အဝေးကွင်း ရှုံးပွဲမရှိမှတ်တမ်းက ဂုဏ်ယူစရာကောင်းနေပါတယ်။